Beeksiifne hojii daangeessoo ta'an dubartoota mindeeffammuurraa 'ittisu', jetti dubartiin duree kuubaaniyaa tokko - BBC News Afaan Oromoo
Beeksiifne hojii daangeessoo ta'an dubartoota mindeeffammuurraa 'ittisu', jetti dubartiin duree kuubaaniyaa tokko
Liiv Gaarfiild, kan Severn Trent, UK'tti dubarii darggaggeettii durewwaan dhaabbilee daldalaa ogganan keessa tokko
Dubartoonni industiriiwwan irra caalaan dhiiroota ta'ee keessatti hojiif dorgomuuf sababii gucawwan iyyannoo 'daanggeessoo' ta'aniitiif akka daangeessaman oggntuun dhaabbata daldalaa tokko dubbatan.
Duree Olaantuun Dhaabbata 'Seven Trent', Liiy Gaarfiild, UK'tti dubartii dargaggeettii durewwaan dhaabbilee daldalaa ogganan keessaa tokko yoo ta'u, dubartoonni muraasni sababiidhuma tarreefam ogummaa kana 'qabaachuun dirqama' jedhuutiin osoo hin dorgomiin hafa jettee jirti.
Kubaamiyoonnis garuu dubartoota waan adda ta'ee hojjatna baayyee isaan barbaachisa jetti.
Dhaabbani ishees wayita qaccaruutti tooftaa kenniinsa qabxii enyummaleessa 'blind marks' maqaa, sanyii ykn saalaa irraa haquun akka raawwatu himti.
Kanneen dula gaggeessa ammoo kubaaniyoota akka bishaani, baabuuraa fi ijaarsaa kanneen hojjattoonni dhiiraa keessatti heddumatanis gosawwan ogummaa adda baasuun akka lakkoofsa dorgomtoota dubartootaa xiqqeessu ni hubatu jedhu.
Ms Gaarfiild garuu mindeessitoonni bakki hojii kan namoota hunda hammatu taasisuuf wayita qaccariitti jijjirama muraasa taasisuu qabaatu jetti. Akka isheetti oggummaan tokko tokko haala keessan baratam.
Dhaabbanni Seven Trent jiddu fi Kaaba Wale keessatti maamiltoota bishaanii kuma 87 qaba.
Beeksiifni hojii isaatiin dorgomtoota hedduu hawwachuuf jecha 'ogguummaa akkasii qabaachuun dirama' isa jedhuu osoo hintaane ogummaawwan muxxannoo damilee adda addaa irraa argaman fi kan sochiilee hojiin ala ta'an irra argame gaafata.
''Yeroo baayyees dubartoonni baayyen 'saanduqawwan hunda guutaa' jechuun yaaduuf ofiitti hinamanan,'' jetti Ms Gaarfiild kan Openreach irraa gara Seven Trent bara 2014tii dabarfamte.
''Ulaagaalee hunda kan hingunnee yoo ta'e, battalumatti hin iyyatan. Tarree keessa of qoodu.''
Maamiltoonni Seven Trent hark 50 dubartoota waan ta'eef, dubartoonni fakkeenya gaarii ta'ee heduutuu damee kana keessatti aragama jetti.
''Dhugaatti ammoo warra kaan osoo fakkeenyawwan gaarii kanneen jiraachu isaanii hubatnaii warreen kaanifiis cimina haamlee kannaaf.''
"Dubartoon hin hojjatan jechuu miti, garuu kanneen waan adda ta'ee raawwatan argun mataansaa caalaa kakaasa,'' jetti.
Jaane Simpson, indastirii baaburaa UK'tti duree injinara dubartii olaantuu jalqabaas, industiriiwwan dhiiroonni keessatti heddumatan keessatt dubartoota harkisuuf hojiin ammas hojjatamu qabaata jetti.
Yaadni Ms Gaarfiid kunis hiriyoota ishee kan akka Jaane Simpsonkan bara 2015 keessa duree indisturii baaburaa Uk keessatti injinara dubartii jalaqabaa taa'een ni deegarama.
"Waan agartu kan ta'u dandeessu akka ta'een amana. jetti Ms Simpson dubartiin wayita umurii 16 turte mana barnoota dhiisuun osoo hojjaattu digrii ishee fi maastarsii ishee baratte kun.
Gara dhaabbata amma oggnsaan keessa hojjattu kanas kan dhufte waggoota lamaan dura.
Ms Simpson akka jettuutis, osoo isheen dhaabbata baaburaa 'Network Rail' hojjataa jirtuu dhaabbatichi marsariitii isaa geeddaruun, dubartoota dardara hawwachuuf beeksiisa baase.
Garuu ammalleen hojiiwwan ijaarsaa irratti dubartoota heedduu argachuuf rakkisaadha.
''Osoo injinar dubartii haadha ijoollee tokko agartee... dhaabbata sana keessa hojjachuun dubartii sana ta'uuf carraa olaanaatu jira,'' jetti.
Dhaabbanni 'Gender equlaity Charity Chwarae Teg kubaaniyoota ijaarsa irra hojatan keessatti lakkoofsa dubartootaa dabaluuf hojataa jira.
''Yeroo baayyees rakkinni akka jiru hubata, haa ta'u malee haalli itti beeksiisa hojii baasan kan dubartoota of irraa dhiibu ta'usaa hin hubatan,'' jetti Helan Antoniyaz chaartii irraa.
Dhaabbanni 'Gender equality charity Chwarae Teg'' kubaaniyoota waliin keessattu warra ijaarsa irra hojjatan waliin baayyinni lakkoofsa dubartootaa akka dabaluuf hojachaa turu hima.
Dhaabbanni maatii Mindeessaa Miles haala beeksiisa hojii isaa geedaruun lakkoofsa baayina dubartoota hojiif iyyatanii irratti geedaruumsa olaanaa argeera
Kibba Wales keessatti, dhabbanni miseensootuma maatiin gaggeefamu 'Miles Hire' dubartoota hedduu gara aangoowwan adda addaatti hawachuuf hojataa tureera.
Jijiramichaa dura, iyyati harki 90 ol kan dhufaa ture dhiiroota irraa ture. Amma garuu lakkoofsi kun walqixa 50-50 ta'eera jedhu abbootiin qabeenya dhaabbata Ryan Miles.
''Kana malees beeksiifni dorgomtootaaf akka tolu taasisuuf jechoota ittiin ibsamu irreen haalaan geeddaree jirra,'' Mr Miles jedhe.
''Iyyata hojii keessatti akka lakkoofsi dubartootaafi dhiiraa walqixa dhufuutti baafna. Kunis kaadhmamtoota gosa garaa garaa akka dhufuun haala gaariin hojjataniif gargaareera.''